လျင်မြန်သောရှေ့ပြေးပုံစံနှင့်နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှုအတွက်ပိုလီမာနှင့်သတ္တု 3D ပုံနှိပ်ခြင်း။
Breaking & PURSUE Excellence
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနကိုလုပ်ပြီးစက်အမျိုးမျိုးကိုကြည့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် CNC ဟာစျေးနှုန်းနဲ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ထားတယ်"
"Aluminum plate? Metals? တစ်နေ့ပြီးတစ်ရက်လျှော့ချပြီး CNC ရဲ့ဒီမြင်းကဘယ်တော့မှစိတ်ပျက်စရာမကောင်းပါဘူး။ Mac ကိုပြောတာကထောက်ပံ့မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ "
အလွန်ကောင်းသော, အရည်အသွေးကောင်း။ နောက်ဆုံးပေါ် CNC စက်များကို အသုံးပြု၍ Kaito သည် ၁ ရက်လျှင်မြန်။ အလွန်လျင်မြန်သောအလှည့်အပိုပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။ အရမ်းမြန်
Craig အမ် Kuhn